Portal:Latin Ameerika - Gpedia, Your Encyclopedia
Latin Ameerika (Af Ingiriis : Latin America) waa magaca qaarada Ameerikada Koonfureed kaasi oo uu bixiyay boqor la odhan jirey Maximilian I kaasi oo ka talin jirey agagaarka wadanka maanta loo yaqaano Meksiko. Qaarada Latin Amerika waxay juquraafi ahaan dhacdaa badhtamaha khadka dhulbadhaha iyo koonfurta dhulbadhaha. Intaas waxaa dheer, dadka ku dhaqan qaaradani waxay ku hadlaan Af-Isbaanish iyo Af-Burtaqiis.
Sii akhri maqaalka...
Muuqaalka Chichen Itza, dhisme taariikhi ah oo ka hadhay boqortooyadii Maya ee ka talin jirtey deegaankaas wakhtiyo hore.
Dalka Barasiil oo loogu dhawaaqo Federal Republic of Brazil waa dal ka soo jeeda bortaqiis, waa dalka shanaad ee ugu balaadhan aduunka ,koofurta amerika iyo dhammaan qaarada laatiin Amerikaba. Dalka brazil waxaa dhinaca bari ka marta badda ATLANTIC OCEAN, oo leh xeeb dhererkeedu tahay 7,491km. Wuxuuna xuduud kala leeyahay dhinaca waqooyi dalka Venezuela,Guyana, suriname iyo french guiana. Dhinaca waqooyi galbeedna waxaa dalka brazil xuduud uu kala leeyahay daka COLONBIA. Galbeedna waxaa kaga beegan BOLIVIA iyo PERU. Sidoo kale dhinaca koofur barina waxuu xuduud kala wadaagaa dalalka ARGENTINA, iyo PARAGUAY, halka waqooyi uu ka xiga dalka URUGUAY. Waxaa la odhan karaa dalka brazil dhammaan xuduud ayuu la leeyahay wadamada waqooyiga marka laga tago ECUADOR iyo CHILE. Tirada dadka reer Brazil waa 190 milyan 83.7 waa dad degan magaalo. 2008 heerka wax aqris iyo qoris la’aanta waxey aheyd 11.48% waxeyna u badnaayeen dhalinyaro dadoodu u dhaxeysay ( 15-19 ). Dhaqaalaha wadanka Brazil waa wadanka todobaad waxaana door libaax leh ka ciyaaray in dhaqaalaha uu kobco ( Brazil’s national development bank (BNDES) ) ,xagga wax iibsiga waa wadanka todobaad Marka laga hadlayo wax soo soorka KAFEEGA waa wadanka ugu weyn ee soo saara Kafeega 150kii sano ee u danbeeyay. Waxey kaloo kordhiyeen joogitaanka suuqyada maaliyadeed iyo badeecooyin waxeyna nasiib u heleen in ay Brazil ay noqoto suuqa afaraad ee ugu weyn baabuurta caalamka.
Wadanada Latin Ameerika:
Xuquuqda sawirka: Brad Mering
Buurta Alpamayo waxay ka mid tahay buuraha ugu cidhifka dheer koonfurta qaarada Latin Ameerika. Buurtani oo inta ugu badan baraf ah sanadka oo dhan ayaa waxay dhacdaa silsilada buuraha Cordillera Blanca wadanka Peru.
Portal:Latin Ameerika/Qof xul ah/3
Maqaalada Latin Ameerika
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Latin_Ameerika&oldid=166707"
Latin Ameerika portal